Etu esi tụọ, zere, ma belata ọnụego ịhapụ ụgbọ elu | Martech Zone
Ọ na-eju m anya mgbe m zutere onye ahịa nwere usoro ndenye ego n'ịntanetị yana ole na ole n'ime ha gbalịrị ịzụrụ site na saịtị nke ha! Otu n'ime ndị ahịa ọhụrụ anyị nwere saịtị ha tinyere ego ha n'ime ma ọ bụ usoro 5 iji si n'ụlọ mbụ gaa ụgbọ ahịa. Ọ bụ ọrụ ebube na onye ọ bụla na-eme ya dị anya!
Kedu ihe ịhapụ Ntanetị Shozụ ahịa?
Ọ nwere ike ịdị ka ajụjụ elementrị, mana ọ dị mkpa ka ị mata na ịgbahapụ ụgbọ ala abụghị ndị ọbịa ọ bụla na saịtị ecommerce gị. Abandonzụ ahịa ịzụ ahịa bụ naanị ndị ọbịa gbakwunyere ngwaahịa na ụgbọ ibu azụmahịa wee mezue ịzụta na nnọkọ ahụ.
Abandonzụ ahịa ịzụ ahịa bụ mgbe onye ahịa nwere ike ịmalite usoro nyocha maka usoro ịntanetị mana ọ na-adaba na usoro ahụ tupu ịmechaa ịzụta ahụ.
Nke kachasị mma
Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ga-agagharị ma tinye ngwaahịa na ụgbọ ibu azụmahịa na-enweghị ebumnuche ịzụta. Ha nwere ike chọọ ịhụ otu obere ngwaahịa maka ngwaahịa ndị a, ma ọ bụ atụmatụ mbupu e mere atụmatụ ha, ma ọ bụ ụbọchị mbuga… enwere ọtụtụ ihe ziri ezi mere ndị mmadụ ji gbahapụ ụgbọ ahịa.
Etu ị ga-esi gbakọọ ọnụego ịhapụ ụgbọ ibu azụmahịa gị
Formulakpụrụ maka Abzụ ahịa Ntanye Rzụ ahịa:
Etu esi tụọ mgbaba ụgbọ ibu azụmahịa na nchịkọta
Ọ bụrụ na ị na-eji nchịkọta Google na saịtị ecommerce gị, ị ga-emerịrị Mbido ecommerce nsuso na saịtị gị. Nwere ike ịchọta ọnụego ịzụ ahịa ịzụ ahịa gị na nkọwa dị na Mgbanwe> Ecommerce> Àgwà Shozụ ahịa:
Rịba ama na e nwere ụzọ abụọ dị iche iche:
Mwepu Ugbo ala - nke a bụ onye na-azụ ahịa nke gbakwunyere ngwaahịa na ụgbọ ibu ma ọ mezughi nzụta.
Lelee Nwepu - nke a bụ onye na-azụ ahịa nke malitere usoro nlele ego mana emechaghị zụọ ya.
Enwere okwu ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ:
Chọgharịa Nhapụ - nke a bụ onye zụrụ ahịa - nke edebara aha ya na mbụ - nke na-enyocha saịtị gị mana ọ gbakwunyeghị ngwaahịa ọ bụla na ụgbọ ala ahụ ma hapụ saịtị ahụ.
Gini bu onodu ugwo ahia lara ala?
Kpachara anya na nkezi ọnụego na ụdị ọ bụla nke ọnụ ọgụgụ. Ndị ahịa gị nwere ike ịdị iche na ikike ọrụ ha, ma ọ bụ njikọta ha, ma ọ bụ asọmpi gị. Ọ bụ ezie na nke a bụ nnukwu usoro ntọala, m ga-etinyekwu uche na usoro nke ịzụ ahịa ịzụ ahịa ịzụ ahịa gị.
Nkezi ụwa - Ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ nke ịgbahapụ ụgbọ ala bụ 75.6%.
Nkezi Mobile - 85.65% bụ nkezi agbahapụ agbahapụ na ekwentị mkpanaaka.
Loss nke Ahịa - ụdị na-efufu ihe ruru ijeri $ 18 kwa afọ na ego site na ụgbọ ibu azụmahịa gbahapụrụ agbahapụ.
Gini bu ugwo onu ahia ahia nke ulo ahia?
A na-ewepu data a karịa 500 ecommerce na saịtị ma soro ọnụego gbahapụrụ gafee mpaghara isi isii site na Ahịacle.
Finance - nwere ọnụego ịgbahapụ ịzụ ahịa 83.6%.
Enweghị uru - nwere ọnụego ịgbahapụ ịzụ ahịa 83.1%.
Travel - nwere ọnụego ịgbahapụ ịzụ ahịa 81.7%.
retail - nwere ọnụego ịgbahapụ ụgbọ ala 72.8%.
Ejiji - nwere ọnụego ịgbahapụ ụgbọ ala 68.3%.
Ịgba Cha Cha - nwere ọnụego ịgbahapụ ụgbọ ala 64.2%.
Gịnị Mere Ndị Mmadụ Ji Ahapụ tszụ ahịa?
Ewezuga ezi ihe kpatara ya, enwere ihe ị ga - emeziwanye na ahụmịhe ịzụ ahịa ịzụ ahịa gị iji belata ọnụego ịgbahapụ:
Meziwanye ọsọ peeji gị - 47% nke ndị na-azụ ahịa na-atụ anya ka ibe weebụ buru ibu na sekọnd abụọ ma ọ bụ obere.
Shippinggwọ ụgwọ dị elu - 44% nke ndị na-azụ ahịa na-ahapụ ụgbọ ala n'ihi nnukwu ụgwọ mbupu.
Oge mgbochi - 27% nke ndị na-azụ ahịa na-ahapụ ụgbọ ala n'ihi oge oge.
Enweghị ozi mbupu - 22% nke ndị na-azụ ahịa na-ahapụ ụgbọ ala n'ihi enweghị ozi mbupu.
Ọdịghị na ngwaahịa - 15% nke ndị na-azụ ahịa agaghị emecha zụọ n'ihi na ihe anaghị agwụ.
Nkwupụta ngwaahịa na-adịghị mma - 3% nke ndị na-azụ ahịa agaghị emecha zụọ n'ihi ozi ngwaahịa mgbagwoju anya.
Processingkwụ ụgwọ nhazi mbipụta - 2% nke ndị na-azụ ahịa anaghị emezue nzụta n'ihi nsogbu nhazi ịkwụ ụgwọ.
Ekwadoro m atụmatụ m, akpọrọ Nyocha 15 na 50A nweta a 15 afọ nwa agbọghọ na a 50-afọ nwoke ịzụta ihe na saịtị gị. Lezienụ anya ka ha si mee ya yana otu o si daa mba. Ga-achọpụta ton naanị site na ịlele ha! Can't gaghị ezere ịhapụ ya kpamkpam, mana ị nwere ike belata ya.
Etu ị ga-esi belata Mwepu ụgbọ ibu azụmahịa
Ihe dị mkpa iji belata ụgbọ ibu azụmahịa na-emeri arụmọrụ, ozi, na nsogbu ntụkwasị obi dị n'elu. Otutu n'ime ihe a ka enwere ike imeziwanye site na imeziwanye akwukwo ndenye ọpụpụ gị.
Performance - Nwalee ma melite arụmọrụ peeji gị na desktọọpụ na ekwentị mkpanaaka. Jide n'aka na ị ga-anwale saịtị gị nke ọma - ọtụtụ ndị na-anwale saịtị nke na-enweghị ọtụtụ ndị ọbịa… na mgbe ha niile bịara, saịtị ahụ mebiri.
mobile - Gbaa mbọ hụ na mkpanaka mkpanaka gị dị elu ma dịkwa mfe. Clear, nnukwu, iche iche bọtịnụ na mfe peeji nke na usoro aga na-oké mkpa ka mobile akakabarede udu.
Ọganihu Ọganihu - Gosiputa ulo ahia gi otutu uzo iji mezue zuo ya ka ha ghara inwe nkụda mmụọ.
Kpọọ Iji Mee Ihe - O doro anya, oku dị iche iche na-eme ka ịzụ ahịa na-azụ ahịa site na usoro ịzụta dị oke egwu.
navigation - Idogharị doro anya nke na-enyere mmadụ aka ịlaghachi na peeji nke mbụ ma ọ bụ laghachi na ịzụ ahịa na-enweghị ọganihu ọ bụla.
Product ọmụma - nye otutu echiche, mbugharị, ojiji, na onye ọrụ-nyefere ngwaahịa nkọwa na ihe oyiyi ya mere ndị ahịa nwere obi ike na ha na-enweta ihe ha chọrọ.
Enyemaka - nye nọmba ekwentị, nkata, na ọbụna nyere aka ịzụ ahịa maka ndị na-azụ ahịa.
Ihe akaebe - itinye nkwado mmadụ akara dịka popups na nyocha ndị ahịa na akaebe nke ndị ahịa ndị ọzọ tụkwasịrị gị obi.
ugwo nhọrọ - gbakwunye usoro ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ inye ego iji belata nsogbu nsogbu ịkwụ ụgwọ.
Akara baajị - nye ndi oru ndi ozo site na nyocha nke ndi ozo nke mere ka ndi ahia gi mara na a na eme ka saịtị gi di nma.
Mbupu - nye uzo iji tinye koodu zip ma nweta usoro ihe eji eme njem na ego.
Chekwaa maka emechaa - nye ndị ọbịa ohere ịchekwa ụgbọ ha maka oge ọzọ, tinye ya na ndepụta ndị ịchọrọ, ma ọ bụ nweta ihe ncheta email maka ngwaahịa ngwaahịa.
Ngwa ngwa - nye ego maka oge ma ọ bụ ebumnuche ọpụpụ iji mee ka ọnụego ntụgharị gbanwee.
registration - achoghi ozi ozo karia ka achọrọ ka ndenye ọpụpụ. Nye ndebanye aha ozugbo a na-enyocha ndị ahịa, mana amanyela ha na usoro ahụ.
Etu aga-esi nwetaghachi ụgbọ ala ịzụ ahịa
Enwere ụfọdụ nyiwe akpaaka dị egwu ebe ahụ na - ejide ma zigara ndị ahịa edebanyere aha na saịtị gị. Izipu ihe ncheta kwa ụbọchị nye onye ahịa gị yana nkọwa gbasara ihe dị n'ụgbọala ha bụ ụzọ dị mma iji mee ka ha laghachi.
Oge ụfọdụ, onye na-azụ ahịa na-eche naanị ịkwụ ụgwọ ka ha nwee ike mezue nzụta. Ozi ịntanetị ịzụ ahịa ahapụghị abụghị spam, ha na-enye aka mgbe niile. You nwere ike ịkpọ oku iji rụọ ọrụ na email gị maka onye na-azụ ahịa gị ka ọ kwụsị ichetara gị ụgbọ ahụ. Anyị na-akwado Klaviyo or Guru ụgbọ ala maka ụdị akpaaka. Ọbụna ha nwere na-agagharị ịhapụ na ncheta-na-na-na ngwaahịa na usoro akpaaka ha!
Ihe omuma a site na Monetate nwere ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ iji meziwanye usoro ndenye ọpụpụ gị na ịbelata ịhapụ ụgbọ ibu azụmahịa. Ha na-eji okwu ahụ bụ “zere” nke m na-ekwenyeghị na ọ bụ eziokwu, n'agbanyeghị. Ọ dịghị onye nwere ike zere gbahapụrụ ịzụ ahịa na weebụsaịtị ecommerce ha.
Tags: ịgbahapụzere ịhapụna-agagharị ịhapụagbahapụ agbahapụlelee-pụọ gbahapụrụpeeji ndenye ọpụpụndenye ọpụpụ page imewendenye ọpụpụ peeji nke usoroe-azụmahịaecommercegbakee agbahapụ ịzụ ahịa agbahapụbelata ịgbahapụ ụgbọ ibu azụmahịaụgbọ ibu azụmahịaịzụ ahịa ịzụ ahịa gbahapụrụọnụ ọgụgụ ịzụ ahịa ịzụ ahịa
Nov 22, 2011 na 12:50 PM
Vinghụ ngwa mgbakwunye n'anya.
Nov 22, 2011 na 8:23 PM
Daalụ maka Ama.
Ekwenyere m, ọ bụ ihe ịtụnanya na ndị mmadụ “anaghị anwale nri ha” ma ọ bụ lelee ndị ọzọ anya ịzụ.
Isi ihe ọzọ kụrụ n'ụlọ na-ezo igbe nkwado koodu. Ana m agbapụta ego ma na-anwa ịchọta koodu ma ọ bụ chọta saịtị ọzọ na ọnụ ala.
Nov 23, 2011 na 8:17 AM
Hụrụ nnwale 15 na 50 ahụ!
Nov 23, 2011 na 9:48 AM
Ee, ọ dịghị ihe ọzọ echiche karịa a 15 afọ na 50 afọ 🙂